Talohan’ny Fifidianana Ao Meksika, Tovovavy Indizeny Iray Mangataka Ny Tsy Hanginana Manoloana Ireo Fahafatesana sy Fanjavonana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2015 11:36 GMT
“Nanomboka ny 26 Oktobra 2012 hatramin'ny 30 May 2015, olona 50 no voaisako fa nanjavona.” Mamaly ny antson'i Rigoberta Menchu sy ny antoko politika Meksikana handatsa-bato ny mpianatra iray avy ao amin'ny fanjakana Guerrero ao Meksika. Pikantsary nalaina tamin'ny lahatsary nozaraina tao amin'ny tambajotra sosialy.
Taorian'ny fanjavonana mpianatra 43 nampalahelo tamin'ny taon-dasa, nisolovava amin'ny hampiatoana ny fifidianana nokasaina natao tamin'ny 7 Jiona ireo mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny fanjakan'i Guerrero, tamin'ny filazana fa mety mifidy mpanao politika voarohirohy amin'ny varotra zava-mahadomelina tsy ara-dalàna ny olom-pirenena. Na izany aza, tsy ny rehetra no miombon-kevitra amin'izany fijery izany, izay nitarika fanafintohinana tamin'ny volana lasa raha nisy manam-pahefana roa nihantsy ny antso hanemotra ny latsa-bato ka nandrisika ny olom-pirenena handeha hifidy.
Tamin'ny 29 May nandritra ny fihaonambe tao Acapulco, nandrisika ny olona mba handray anjara amin'ny fifidianana farafahatarany amin'ity volana ity ny Governora Guerrero Rogelio Ortega sy Rigoberta Menchú, ilay voatendrin'ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana (INE) vao haingana ho “mpanara-maso ny fifidianana”. Tamin'ny famaliana ny fanontaniana avy amin'ny mpanatrika, niantso ireo Meksikana hifidy i Menchú (mpikatroky ny zon'olombelona sy mpitarika indizeny avy ao Goatemala izay nahazo ny loka Nobel ny Fandriampahalemana tamin'ny 1992), niteraka firehetam-po tao amin'ny aterineto ary nahatonga azy ho lasibatry ny tsikera mahery vaika izany.
Nitsena fahatezeran'ny daholobe ao anatin'ny fiomanana fifidianana federaly sy isam-paritra nokasaina tamin'ny 7 Jiona ny antso hifidy nodradradrain'ny INE. Nahitana fihetsiketsehana mitaky ny olompirenena tsy hifidy ny fanjakana Guerrero manokana noho ny herisetra sy ny tsy fandriampahalemana. Ny ray aman-drenin'ireo mpianatra 43 nanjavona tao amin'ny Sekoly Ambanivohitra Raúl Isidro Burgos ao Ayotzinapa no tena nitarika ny fihetsiketsehana.
Nahaliana manokana ny tambajotra antserasera ny tenin'ilay tovovavy tao amin'ny fihaonambe, izay namaly izany antso izany hoe:
Tsy fantatro hoe nahoana no afaka miangavy anay hifidy ianao […] 27 taona aho […] ary nanomboka tamin'ny 26 Oktobra 2012 ka hatramin'ny 30 May 2015, tanora 50 no voaisako ho nanjavona […] Ahoana, Atoa Governora, no ahafahanao mangataka amiko hifidy? Ahoana no ahafahan'ireo antoko politika ao Guerrero mangataka aminay tanora – mahita anay ho ampahany be indrindra amin'ny mponina eto Meksika – hifidy?
Tamin'ny firesahana mivantana tamin'ilay nahazo ny Loka Nobel, hoy indray izy :
Tsy azo vonoina ny fahavinirana sy ny fahatezerana ary fantatro fa takatrareo izany. Tsy afaka mangataka fahanginana iray minitra hoan'ireo nanjavona izahay satria ny fangatahana fahanginana iray minitra hoan'ny olona tsirairay nanjavona sy lasibatry ny vono olona ao amin'ny firenentsika, ao amin ‘ny fanjakantsika dia midika fahanginana mandrakizay ho anay.
Ity ambany ity ny lahatsary feno misy ny lahateny amin'ny teny Espaniola:
Niteraka hatezerana teo amin'ny maro koa ny teboka iray mampiady hevitra avy amin'ny fanambarananataon'i Menchú mikasika ny raharaha Ayotzinapa.
Nanatsonga ny tenin'ny solontenan'ny ray aman-drenin'ireo mpianatra tsy hita tao amin'ny pejy Facebook-ny ny fikambanana Desinformémono:
“Rigoberta Menchú está fuera de contexto, porque no conoce la realidad de nuestro estado ni lo que ocurrió en la normal de Ayotzinapa. Si quiere saber la verdad, que pregunte […quién] le está pagando por hacer esos comentarios”, manifestó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos … “[Menchú] está al servicio de quien le pagó”
Tsy maharaka ny toe-draharaha i Rigoberta Menchú satria tsy zatra ny zava-misy ato amin'ny fanjakantsika sy izay zava-nitranga an-tsekoly tao Ayotzinapa. Raha te-hahafantatra ny marina ianao, anontanio [iza] no manakarama azy mba hanao izany fanehoan-kevitra izany, “hoy i Felipe de la Cruz, mpitondratenin'ny ray aman-drenin'ireo mpianatra, mpampianatra Ayotzinapa nanjavona … Miasa hoan'ireo izay manome vola azy i [Menchú].
Nampametram-panontaniana tao amin'ny tambajotra sosialy ihany koa ny fanendrena azy. Ohatra, tao amin'ny Twitter, milaza momba ny toeran'i Menchú ao anatin'ny krizy politikan'i Goatemala i Aldabi :
Mangataka amin'ny filohan'i Goatemala hametra-pialàna i Rigoberta Menchú; saingy tonga eto izy hanaja ny maha ara-dalàna ny fitondrana amin'ny alalan'ny fangatahana fifidianana.
Mandritra izany fotoana izany, misy resaka nandeta tamin'ny fanehoan-kevitra tafaporitsaka noraisim-peo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna nataon'ny filohan'ny INE, Lorenzo Cordova Vianello, namazivaziany ny fomba firesak'ilay mpitarika indizeny iray hafa :
Toa tsy nanana olana amin'ny fandraisana vola avy amin'ny olona mpanavakavaka fiarahamonina indizeny i Rigoberta Menchú …
Nitsikera ny fandraisana anjaran'i Menchú tamin'ny fifidianana Meksikana ihany koa ny habaka Pueblos en Camino (Villages en Route):
Nanao fanambarana sy namaly ireo fanontaniana nandritra ny valan-dresaka hoan'ny mpanoratra gazety natrehin'ireo manampahefana avy ao amin'ny INE i Rigoberta Menchú, vehivavy indizeny avy ao Goatemala sy nahazo ny Lokan'ny Fandriampahalemana tamin'ny 1992. Mitovy bebe kokoa amin'ny fampahafantarana kintan'ny baolina kitra vao avy novidin'ny ekipa Eoropeanina vola iray tapitrisa dolara ny fisehoan-javatra […] Tsy kisendrasendra izany, fa izany indrindra no fikasana: mba hampisehoana ny olona fa nividy olo-malaza izy ireo.
Iray amin'ireo adihevitra maro mandeha ny adihevitra momba an'i Menchú. Mbola miparitaka ny fanohanana ny fanafoanana faobe ny fifidianana, raha manontany ny dikan'ny fandraisan'anjaran'izy ireo amin'izany ny olom-pirenena.
Maneho ny miafina ambadik'ity karazana fihetsiketseham-panoherana ity tao amin'ny bilaoginy Sociedad y Poder (Fiarahamonina sy Fahefana) ny mpikaroka iray, Raúl Trejo Delarbre
Fanapahan-kevitra iray mangidy ny fanafoanana ny latsa-baton'ny tena. Tsy misy olona faly amin'ny fanafoanana ny latsa-batony. Tonga izany noho ny adin-tsaina sy ny fahakiviana. Saingy mety manampy amin'ny fanasongadinana ny filan'ny fijoroana ara-politika isan-karazany izany.
Tsy nahodikodina ny latsa-batoko. Amin'ny maha-olom-pirenena ahy, ny fahalalahako no mamela ahy hanaiky na hiala amin'ny fifidianana. Fanapahan-kevitra mifanohitra amin'ny toetr'andro sy mandratsy fijery ny fanafoanana ny latsa-bato, saingy madio sy afaka amin'ny fanintonana ara-politika.
Ny lavitra indrindra ny ratsy dia tsy ny mifidy antoko politika izay tsy halanay indrindra, fa amin'ny fandatsahanay vato, dia ny manapaha-hevitra tsy hanome tombondahiny na iza na iza. Izaho no tompon'ny latsa-batoko, fa tsy ny antoko politika. Tsy ireo antoko politika ireo […]
Però 23 Mey 2022
Fahalalahàna miteny 03 Janoary 2022